Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment एक पागल प्रेमीका जसले प्रेमीलाई आफ्नो नाइटो काटेर दिइन् उपहार ! - Pnpkhabar.com
एक पागल प्रेमीका जसले प्रेमीलाई आफ्नो नाइटो काटेर दिइन् उपहार !
एजेन्सी : संसारमा कोहि मानिस प्रेममा यति सम्मको पागल हुन्छन् भन्ने उदाहरण एक युवतीले दिएकी छिन् । ती युवतीले आफ्नो नाइटो काटेर प्रेमीलाई उपहार दिएकी छिन्। मेक्सिकोमा एक अनौठो घटना घटेको छ जुन कुरा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ ।
मेक्सिकोको गुआडालाजाराकी एकजना युवतीले आफ्नो नाइटो काटेर प्रेमीलाई उपहार दिएकी छिन् । २३ वर्षकी पालिना क्यासिलास लेन्डरोस नाम गरेकी ती युवतीले आफ्नो प्रेमीलाई खुसी पार्नका लागि यसो गरेको बताइन् । उनले झण्डै तिन वर्षअघि आफ्नो नाइटो नै काटेकी रहेछिन् ।
परिवारको विरोधका बाबजुत जिउका धेरै ठाउँमा टाटु खेपेकी तथा जिब्रो पनि छेडेकी उनले प्रेमीकाको लागि नाइटो समेत काटिन् । तर यो उनले ब्यायफ्रेण्डकै अनुरोधमा काटेको पनि बताएकी छिन् । तर पछि उनीहरुको ब्रेकअप भयो । तर उनले यस्तो आफ्नो प्रेमको लागी बलिदान दिएपनि किन यस्तो भयो भन्ने कुरो अझै रहस्यमय रहेको छ ।
त्यसैगरी ती युवतीको नाइटो फ्याँक्ने अपरेशन निकै खतरनाक थियो । पछि संक्रमण भएर उनको झण्डै ज्यान समेत गएको तर उनले अहिले बल्ल आएर आफ्नो गल्तीको महसूस गरेकी बनाएकी छिन्।